BWC011 - OMG WIFI / GPS / 4G Camera Worn Camera (Batrị Na-agbanye Ọkụ) | Ngwọta OMG
Igwe ahụ dị iche iche bụ ngwaọrụ ndị nwere ike ịdekọ vidiyo na ọdịyo. Ngwaọrụ nwekwara ike ịnye vidiyo na ọdịyo site na 3G ma ọ bụ 4G, na-ebi ndụ dị na GPS. Ngwaọrụ nwere nyocha TFT na bọtịnụ na ya ma onye ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ ahụ ngwa ngwa. Ndị uweojii, nchebe, na ndị uweojii na-ahụ maka ndị mmanye na-ejikarị igwefoto ahụ.
Ngwaọrụ ahụ dị nhata ma dị mma maka iji obere edekọ ihe.
- Onye ọrụ nwere ike ịnweta vidiyo na ọdịyo site na 3G, 4G ma ọ bụ WiFi,
- Onye ọrụ nwere ike ịnweta nsụgharị ndụ nke ngwaọrụ site na GPS arụnyere n'ime ngwaọrụ ahụ. A ga-edekwa data GPS na faịlụ ndekọ na ọdịyo na vidiyo, ya mere onye ọrụ nwere ike ịnweta ozi ọnọdụ na ndekọ ndekọ.
- Jiri batrị lithium nye ike. Ngwaọrụ nwere ike ịdekọ oge maka 12 awa na batrị 2.
- Oghere nchekwa nchekwa 32G. (64G ~ 128G nhọrọ ohere nchekwa)
- Igwefoto 4 nde pixel, na-akwado ndekọ na 1080P, 720P ma ọ bụ D1 mkpebi, nkwado iji foto 40 nde pixels, 32 nde pixels na 2 nde pixels.
- Nkwado IR. Nkwado ndekọ na abalị.
- Dekọọ aha faịlụ nwere ozi na ụbọchị, oge, ụdị ndekọ, nke mere ka ọ dịkwuo mfe maka nyocha na akwụkwọ.
- Onye ọrụ nwere ike ịchọpụta, chọpụta ma bipụta faịlụ na ngwaọrụ ahụ.
- Kwado bọtịnụ egwu. A pụrụ izipu mkpuchi bọtịnụ egwu site na 3G / 4G.
- Debe ihe ndoro ezo na-eme ka ihe akaebe ahụ dịkwuo mma.
- Ngwaọrụ nwere ike igosi ID ngwaọrụ, ID njirimara, ụbọchị na oge.
- Ngwaọrụ nwere ike igosi ozi gbasara ojiji batrị, ọnọdụ nkwụ ụgwọ, oge usoro na ebe nchekwa. Ngwaọrụ nwere ihe ngosi doro anya maka ike, ndekọ vidio ma ọ bụ ọdịyo. Mgba ọkụ na-egosi ike, ìhè ọkụ na-egosi ndekọ vidio, ìhè odo na-egosi ndekọ ndekọ.
- Ngwaọrụ nwere ike ịkọ mkpu egwu egwu, gụnyere mkpu maka batrị na-agba ọsọ, enweghị oke mkpuchi mkpuchi wdg.
- Ngwaọrụ nwere faịlụ ndekọ. Ngwaọrụ nwere ihe ndekọ na-agụnye ike na / gbanyụọ, ndekọ vidio, edekọ ụda, na-ese foto, ọnọdụ ọnọdụ GPS, njikọ 3G / 4G, na njikọ WiFi.
Oge iweghari oge <8 s
Video Ntinye vidiyo 1x Digital Camera for 1080p / 720p / 360p ndekọ, dị maka igwefoto mpụga
Ihe ngosi vidiyo Igwe LCD 2 nke anụ ọhịa LCD
Nhazi mkpebi 1920×1080/1280×720/640×360
ụba ọnụego 30 fps @ 1080p
Ọnọdụ ndekọ Dekọọ ụda na vidiyo n'otu oge ahụ
mkpakọ H.264 (Nkọwa elu ruo ọkwa 4.1)
Audio Ntinye ederede Ntinye 1x MIC, kwado njikọ intercom na USB
Ihe ndekọ ndekọ Nkwado egwu na-akwado
snap Nkwado nkwado mgbe ị na-edekọ (ihe ntanetị nke foto na nhazi ndekọ)
nchekwa Ejiri na 32GB TF kaadị (maka 32 ~ 128GB)
ìhè isi Mpụ ọkụ Ịbawanye nchapụta mgbe ị na-edekọ ma ọ bụ na-ewere foto
laser Dezie echiche mgbe ị dekọtara ya
IR Ruo 10 Mita na Visible udi oyiyi na abalị
Ụzọ redio abụọ Kwuo okwu Kwadoro redio abụọ n'etiti ngwaọrụ dị iche iche (naanị maka 4G / 3G ngwaọrụ)
Gwaghachi na ikpo okwu Kwadoro redio abụọ n'etiti ngwaọrụ na ikpo okwu (naanị maka 4G / 3G ngwaọrụ)
Lens Onu oghere > 125 Celsius
Oti mkpu Ntinye olu Enwere ike igosi ndenye mgbasa ozi na mkpuchi n'elu ikpo okwu
interface USB 1X USB, maka ịcha, nkwurịta okwu na PC, melite OS, jikọọ igwefoto mpụga na ihe ndị ọzọ
3G / 4G Nhọrọ, wuru na 3G / 4G module (LTE FDD / LTE TDD / WCDMA / TD-SCDMA / GSM / CDMA EVDO / CDMA 1x.
WiFi Nhọrọ, kwado njikọ WIFI na AP
GPS GPS Nhọrọ nke nhọrọ maka BDS / GPS / GLONASS, idekọ ebe na ọsọ
femụwe OSD Ngosipụta ma dekọọ oge, NJ ID, ID ID, ọnọdụ, ọsọ
Gwuo azụ Nkwado kwadoro, faịlụ edepụtara site oge na mkpu
Gwuo ọsọ Kwado 1 / 128 na 128
Nkọkọ ndekọ / post-ndekọ Nchịkọta 20 kachasị elu na ndekọ na ntinye ederede
Dewarp Nkwado nkwado iji mee ka foto ahụ dịkwuo mma
Ọnọdụ nchekwa Okwenye okwesiri iji tinye ọnọdụ ma ọ bụ n'ụdị n'ọnọdụ nchekwa
Debe ndoro ezo Akwado ndetu nzuzo, vidiyo ezoro ezo nwere ike kpoo na ọkpụkpọ pụrụ iche
log Idozi / gbanyụọ ndekọ, gbanwee mgbanwe, mmalite ndekọ, mkpu wdg
software egwu Egwuregwu Player, na-ejikọta ọtụtụ igwe ese foto, nwekwara ike ịkpọ faịlụ ezoro ezo
CMSV6 Ejiri maka 4G / 3G nlereanya naanị, kwado anya ndụ / egwu ndụ / akụkọ ihe mere eme
upgrade Njikwa Firmware Firmware nwere ike imelite ọ bụ ezie na USB
arụ ọrụ ọnọdụ okpomọkụ -40-60 ℃
Ndị ọzọ Time mekọrịta na GPS, internet, PC
Ogo abụọ Abụọ dị iche iche dị iche iche maka edekọ ma na-agbanye ndụ site na 4G / 3G
ndabere Nwere ike ịtọ na ntọala ndabara
egosi Ike, Record, Snap, Record ndekọ
batrị ike PC 1 PC batrị, 2600mAh nke ọ bụla, debe ngwaọrụ NON-4G na-agba ọsọ maka 8h, mee ka ngwaọrụ 4G na-agba ọsọ maka 4.6h. Oge nkwụ ụgwọ bụ banyere 4h.
Nkwado batrị 60MA (Nhọrọ, jide ngwaọrụ na-agbanwe n'oge batrị batrị ma ọ bụ batrị agbapụ.)
size 88.3 * 59.8 * 34.4mm
Wight banyere 165g
BWC011 Isi Na-ese Igwe Video Video
BWC011 - OMG WIFI / GPS / 4G Camera Worn Camera (Batrị Na-agbanwere ọkụ) gbanwere ikpeazụ: May 3rd, 2020 by admin
Nzuzo 6218 26 Echiche Taa
BWC095-WF - WIFI GPS Live Streaming Ahụ igwefoto…
Mbughari Batrị - Igwefoto Worn Ara (BWC037)
Igwefoto ndị uwe ojii uwe ojii GPS Batrị
Igwefoto Ekiri Isi - Ambarella A7LA50 chipset,…
Igwefoto WIFI Pen Camera, P2P, IP, 1080P Onye na-edekọ vidiyo,…